समाजको अगुवाई गर्दै बुहारीहरु – Saurahaonline.com
समाजको अगुवाई गर्दै बुहारीहरु
सौराहा अनलाइन | २०७२, २७ पुष सोमबार
नवलपरासी, २७ पुस । रोजागारीका लागि विदेश गएका श्रीमान्का श्रीमतीहरुले घरमा के गर्दछन् भन्ने जिज्ञाशामा धेरैको जवाफ घर धन्दा भन्ने आउछ । तर नवलपरासी देउराली झ्यालबासका श्रीमान विदेश भएका महिलाहरु समुदायको अगुवा बनेका छन् । १८ बर्षको उमेरमै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी देउराली– ६ की कृष्णकुमारी राना गाउँकै अगुवा बनेकी छिन् ।
शुरुमा एक दुई जना भएको ठाउँमा बोल्न हिच्किचाउन उनी एक दुई पटक तालिममा सहभागी भएपछि बोल्ने आँट आएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राखेको कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उनलाई समुदायको छलफलमा सहभागी हुदै नेतृत्व सम्म पुग्ने अवसर प्राप्त भएको हो । त्यसो त झ्यालबास कावासोती पुग्ने सडक महिलाहरुकै सक्रियतामा निर्माण हुन थालेको छ । डण्डा हुदै झ्यालबास पुग्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले उनीहरुले छोटो बाटोको लागि यो सडक निर्माण गर्न पहल गरेका हुन् ।
विवाह गरेको पाँच बर्ष जति त ज्ञानको बुहारी , गोरेको बुढी हो भन्थें अहिले मेरै नामले चिन्दछन् खुसी हुदै कृष्णकुमारी रानाले भनिन् –‘ वडा हाक्ने सहजकर्ता बनेकी छु’ । गाउँमा हुने कार्यक्रममा चासो राख्दा मानव अधिकार आयोग मार्फत तालिम पाएको बताउदै उनले भनिन–‘ अहिले चिठ्ठी पनि आउन थालेको छ , ज्ञान पनि पाइने भत्ता , अनी खाजाको ब्यवस्था पनि राम्रै हुदो रैछ ’ । गाउँका धेरैले सुसराको विडो थाम्न थाली भनेका छन् । श्रीमान् विदेशमा र ससुरा बुढा भएकाले घर मुली समेत उनै बनेकी छिन् । त्यसो त घर खर्चका लागि परदेशबाट श्रीमान्ले बाबालाई पैसा पठाउछन् भने श्रीमतीलाई पकेट खर्चका लागि छुट्टै पैसा पठाउने गरेको उनले बताइन ।
ससुरा संग पैसा माग्यो भने तँलाई पनि त छोराले पठाएको छ भन्छन् –‘ ससुरालाई पठाएको मलाई थाहा हुन्छ मलाई दिएको घरका लाई थाहा हुन्छ त्यसले झन सजिलो बनायो’– उनले थपिन ।
उनी जस्तै अरुणीमा परियार पनि गाउको अगुवा बनेकी छिन् । विपन्न वर्ग भनेर सामुदायिक वनले अवसर दिने गरेकाले उनलाई अगाडि आउन सहज भएको हो । उनको श्रीमान पनि खाडीमा छन् । गुल्मीबाट बिहाव गरेर सात बर्ष अगाडि यहाँ आएकी उनी मुसेडाँडाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको सह सचिव बनेकी छिन् । वडा स्तरमा हुने भेला र छलफल कक्षाले अगाडि ल्यायौं परियारले भनिन्–‘ भेलामा पाएका किताव घरमा लगेर पढ्दा प्रेरणा मिलेको छ ’ ।
देउराली– २ मा खोप केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गरी भवन निर्माण गर्न यहाँका महिलाको योजना छ । उनीहरुले महिलाहरु गर्भवती हुदा चेक जाँच गर्न, गाउँ घर क्लिनिक सञ्चालन गर्न भवन निर्माण गर्ने अठोट लिएका हुन् । ३८० घरधुरीबाट उनीहरुले रु एकसय देखि १० हजार सम्म चन्दा संकलन गरी तिन लाख पुर्याएका छन् ।
बालकल्याण प्रा।विको जग्गा समुदायको छलफलमा लिने र सोही जग्गमा भवन निर्माण गर्ने उनीहरुको योजना छ । चार पाँच बर्ष सम्ममा १५र२० लाखमा भवन तयार गछौं लक्ष्मी विकले भनिन् –‘ संगठित महिलाको समहुले नै समाजका अभाव पुुरा गर्न सक्छन् ’ ।
राज्यमन्त्रीको सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधरणको घरमा डोजर लगाएपछि .. २०७७, २३ फाल्गुन आईतवार
असर आन्तरिक राजस्वतर्फ ९ अर्ब ७२ करोडले राजस्व संकलन घट्यो २०७७, २३ फाल्गुन आईतवार
तपाईको यस्तो छ आज भाग्यरेखा ? २०७७, २३ फाल्गुन आईतवार
एनसेल र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम शुरु २०७७, २२ फाल्गुन शनिबार
दार्चुलामा जीप दुर्घटना, चालकसहित तीनको मृत्यु २०७७, २२ फाल्गुन शनिबार
माधवकुमारको ओलीलाई आग्रह : राजीनामा दिएर थोरै भएपनि नैतिकता बचाउनुस् ! २०७७, २२ फाल्गुन शनिबार
काठमाडौं : एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालसँगको.....
माधवकुमारको ओलीलाई आग्रह : राजीनामा दिएर थोरै भएपनि नैतिकता बचाउनुस् !
संसद अधिवेशन भोलिबाट, के-के छन् कार्यसूची ?
सक्रिय बने विप्लव : मोहन वैद्य, आहुति र ऋषि कट्टेललाई भेटे
प्रधानमन्त्रीले सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी झार्दै भने : ‘यि लड्डु यस्तोमा खानुपर्छ’
एक्सनमा उत्रिदै चितवन प्रहरी : घुस दिन खोज्ने ट्रक चालक पक्राउ
जितेपछि मात्तिने र हारेपछि आत्तिन हुँदैन, हार स्वीकार गर्नुपर्छ : देउवा
विप्लवले भेटे बादलसँग, कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्ताबारे छलफल